तपाईंमाथि कसले निगरानी गर्दैछ ? अब स्मार्टफाेनले नै दिनेछ सूचना - Tech News Nepal Tech News Nepal
तपाईंमाथि कसले निगरानी गर्दैछ ? अब स्मार्टफाेनले नै दिनेछ सूचना
काठमाडौं । गुगलले हालै सार्वजनिक गरेको अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड १२ मा थुप्रै फिचर थप गरिएका छन् । ओएसको नयाँ अपडेटमा लक्ड फोल्डर, क्विक डिलिट फिचर, प्राइभेसी ड्यासबोर्ड लगायतका नयाँ फिचर थप गरिएका छन् ।
यसमध्ये, कसैले तपाईंको क्यामेरा वा माइक्रोफोनको पहुँचमा छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने फिचर पनि रहेको छ ।
यदि कसैले तपाईंको फोनमा अनैतिक हिसाबले पहुँच पाएको छ र तपाईंको फोनको स्क्रिनको सबैभन्दा माथि दाहिनेतिर एउटा आइकन देखिनेछ, जसमा क्यामेरा वा माइक्रोफोनको संकेत हुन्छ ।
यदि कसैले तपाईंको क्यामेरामा पहुँच पाएको छ भने तपाईंको स्क्रिनमा क्यामेराको आइकन देखापर्छ । यसको अर्थ हो कुनै ह्याकर वा कुनै मालिसियस एपले तपाईंको क्यामेरा र माइक्रोफोनमा पहुँच पाए/नपाएको तपाईंले सहजै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तैगरी एन्ड्रोइड १२ ले अब तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको कुन एपले संवेदनशील सूचनामा पहुँच पाइरहेको छ भनेर पनि थाहा पाउनसक्छ ।
क्यामेरा, माइक्रोफोनसहित तपाईंको लोकेसन, क्यालेन्डर, कल लग, फाइल लगायत अन्य डेटामा कुन एपको पहुँच छ भनेर यो नयाँ ओएसले पत्ता लाउनेछ ।
यसका लागि प्रयोगकर्ताले प्राइभेसी ड्यासबोर्डलाई एक्टिभ गर्नुपर्ने हुन्छ । सेटिङमा गएर प्राइभेसी अप्सनमा गएर त्यहाँ उपलब्ध ‘प्राइभेसी ड्यासबोर्ड’ मा क्लिक गरेर कुन एपले तपाईंको कुन डेटामा पहुँच पाइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ ।
काठमाडौं । हरेक वर्ष नेटफ्लिक्सले आफ्नो स्ट्रिमिङ प्याकेजको मूल्य वृद्धि गर्दै गइरहेको छ । गत
यी २२ वर्षे युवा, जो आफ्नै सेल्फी फोटो बेचेर रातारात करोडपति बने
काठमाडौं । इन्डोनेसियाका एक विद्यार्थी आफ्ना सेल्फी फोटोहरुलाई नन-फन्जिबल टोकन (एनएफटी) का रुपमा बिक्री गरेर
अब विन्डोज कम्प्युटरका एन्ड्रोइड गेम खेल्न सकिने, सार्वजनिक भयो बेटा भर्सन
काठमाडौं । गुगलले विन्डोज कम्प्युटरका लागि आफ्नो एन्ड्रोइड गेम्सको सीमित बेटा सार्वजनिक गरेको छ ।